Maitiro ekumisikidza uye kushandisa WhatsApp Webhu ye iPhone, iyo GIDZIDZO | IPhone nhau
Nhasi uno tinozvibvumira humbozha hwekupa ruoko kune avo vese vasingazive WhatsApp Webhu, iyo multiplatform WhatsApp mutengi iyo inoshandisa mukana webrowser yedu kuti igare ichitibatanidza nehama dzedu kuburikidza neyakanyanya kushandiswa pakarepo mameseji mutengi, sezvo isu yakaziviswa nezuro, WhatsApp yatosvika pamamirioni mazana mapfumbamwe evashandisi vanoshanda. Ndeipi nzira iri nani yekupemberera pane nekukubatsira kuti ugare wakabatana kana zvichikwanisika?, usarasikirwa nemutungamiri uyu watinokuudza ins uye kubuda kweWhatsApp Web, isu tichagadzirisa kusahadzika kwako uye isu zvakare tichakubatsira iwe kuti uwane zvakanakisa kubva pane ino WhatsApp basa.
1 Chii chinonzi WhatsApp Web?
2 Dhawunirodha WhatsApp Webhu
3 ChitChat, iyo WhatsApp Web kunyorera kweMac OS
4 Mashandisiro ekushandisa WhatsApp Webhu
5 WhatsApp Web yakachengeteka here?
6 Unoshandisa bhatiri rakawanda here?
Chii chinonzi WhatsApp Web?
Zvinoenderana nekuti ndiani waunobvunza anogona kupindura kuti ibhotoro, kana nzira nyowani iyo WhatsApp yaburitswa muhope kutibvumidza kushandisa WhatsApp zvakare kubva kuPC kana piritsi. Mhedzisiro yacho ndeye WhatsApp mutengi inoenderana neyedu kifaa kuburikidza newebhusaiti uye izvo zvinotibvumidza kuti titaure nevatinosangana navo tichishandisa nharembozha sevha. Kune izvi zvakafanira kuti mudziyo wedu uve unowanikwa zvizere, sezvo kusiyana neTeregiramu, WhatsApp Web haishandisi gore kubatanidza kuwiriranisa data, asi sevha chichava mudziyo wedu.
Iyi yekupedzisira tsananguro ndiyo yakonzera kupokana kukuru, pachokwadi ndicho chikonzero chekuti vhezheni yeWhatsApp Web yeIOS yakanonoka.
Dhawunirodha WhatsApp Webhu
WhatsApp Web haina "kurodha pasi", kureva kuti, tichachengeta mukana uyu mumakotesheni, nekuti WhatsApp Web ibasa rinobva pawebhusaiti, kushandisa WhatsApp Webhu tinongofanirwa kuisa kero "https://web.whatsapp.com" kupi icharatidzwa mutengi uye mirairo yatinofanira kutevera kutora mukana weichi chiitiko. Saka, kana iwe ukashandisa PC kana Linux tiza kubva pazvinogona kuitika WhatsApp zvirongwa nevatengi zvavo, sezvo mazhinji acho asiri chinhu kunze kwehutachiona uye malware ayo asingatarisiri kupfuura kutora mukana wekuti uve nemhosva yekukubira.
Nekudaro, muMac OS X isu tine mukana wekurodha pasi yakasarudzika WhatsApp Web mutengi, inonzi ChitChat kana WhatsMac, iko kushanda kwayo, izvo zvinotibvumidza kuti tiite pasina bhurawuza kushandisa WhatsApp Webhu, kufambisa maitiro uye kutipa rusununguko rwaanotipa, tobva tazotaura nezvazvo.
ChitChat, iyo WhatsApp Web kunyorera kweMac OS
Ichi chishandiso chakasununguka, zviri nyore kwazvo kushandisa uye ine rutsigiro kumashure iyo inokupa iwe kugara uchigadzirisa. Ini ndashandisa iyi application kubva payakatanga uye inoratidza mhedzisiro, zvichitibvumidza kusevha bhatiri iro bhurawuza rakavhurika rinoshandisa kushandisa WhatsApp Webhu, pamwe nemikana yemutengesi akamira ega, seyeTeregiramu yekushandisa kweMac OS X
En ichi chinyorwa Takataura zvakadzama nezve ChitChat, uye iwe unogona kuwana zvekuburitsa zvinongedzo zve tora zvakanyanya kubva paWhatsApp Webhu kubva kuMac yako, nekukurumidza uye nekugarika zvisingaite.
Mashandisiro ekushandisa WhatsApp Webhu
Maitiro acho ari nyore, asi isu tichiri kuzoitsanangura muchidimbu sezvazvinogona, kune avo vachiri nemhando yekusahadzika, gwara-nhanho-rino gwara rinokutendera batanidza iyo WhatsApp ye iPhone yako neWhatsApp Web kuitira kuti iwe ugone kuwana ese mashandiro kubva kukhibhodi yako, uchiwedzera kugadzirwa kwako uye kugadzikana.
Isu tinoshandisa WhatsApp Webhu, nekuda kweizvi tinoenda kune WhatsApp application pane yedu iPhone, uye muZvirongwa (pasi kurudyi) WhatsApp Web ichaonekwa nyore nyore.
Isu tinopinda icho chikamu chegadziriro uye tinya pa «tarisa QR kodhi»Mushure mekumisikidza switch.
Iye zvino tinoenda kune webhusaiti «https://web.whatsapp.com»Ikoko kodhi yeQR ichaonekwa, kune avo vari kuzoshandisa ChitChat (WhatsMac) ivo vanozoona iyo inoenderana QR kodhi.
Isu tinoongorora QR kodhi yatinoratidzwa uye inozoenderana otomatiki iPhone yedu neWhatsApp Web.
WhatsApp Web yakachengeteka here?
Isu hatisati tave neruzivo rwakadzama nezvazvo, pasina mubvunzo munguva yekutanga kwekumisikidzwa kwayo, paive nezvinetso zvakati wandei zvekuchengeteka izvo zvakabvumidza, semuenzaniso, kuwana mafoto ehurukuro, zvisinei, yakachengeteka senge chero imwe nzira yakafananaNhasi hatigone kuwana chero mameseji nzira inoonekwa seyakachengeteka chose, uye hatina imwe sarudzo kunze kwekurega basa. Nekudaro, izvi hazvifanire kukutadzisa iwe kuishandisa, nguva dzose munzvimbo yakajairika yekuchengetedza maunofanira kushandisa chero rudzi rwe software.
Unoshandisa bhatiri rakawanda here?
Iyo inonyatso sanganisira yepamusoro bhatiri kunwiwa kupfuura iyo inobva kuTeregiramu semuenzaniso, sezvo isingashandise kuwiriranisa mugore, asi yedu iPhone ndiyo sevha pachayo. Nekudaro, usatarisira kunwa kwakafanana neizvo iwe zvaungaite kana iwe uchiwanzoshandisa WhatsApp kubva kune yako iPhone. Ichokwadi kuti kunwa kwakakura, asi kwete nekuti zvirizvo chaizvo, asi nekuti zvinofanirwa kunge zvakati wandei, asi vakomana paWhatsApp vafunga kushandisa nzira iyi yakasarudzika kugadzira WhatsApp kuwanda uye isu hatina imwe sarudzo kunze kwekurega basa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » WhatsApp Web ye iPhone, yakajeka gwara
Uye pano isu tine gwara reZVO zvausingafanirwe kuita kana uchigadzira application, nekuti WhatsApp Webhu ndiyo hombe bhodhi inogona kuve iripo. (asi makorokoto nekunyora)
Teregiramu yakachengeteka zvachose pamwe neyakajeka Chakavanzika Chat chinhu.
Ini ndinokurudzira iwe kuti uite zvakafanana (gwara) asi neTeregiramu kuti iwe unozowana zvechokwadi kubva mairi uye nekudaro kushambadzira kushoma kuitira kuti iwe ugone kuvhura maziso ako zvakanyanya.
@Marc Ini ndinofunga kuti kunyangwe ndikashambadza Teregiramu, myoria ichave yakawanda pane chii, nei? Zvakanaka, zviri nyore nekuda kwekushambadzirwa uye nezvayakaita mune imwe nyaya iyo mune chero kambani iyo iwe yaunowedzerazve yakawanda bharanzi kana uine chirongwa, ivo vanokupa iwe isina muganho whsta, facebook, twitter. Ehezve, aya maapplication matatu ane yakawanda yekushandisa data nekuti vese vanayo mahara, kana ini ndichitoziva kuti Teregiramu kana iwe unayo paPC yako haizotambise bhatiri kana data.
Vese vashandisi vangu vane whsta, ivo vakaita semunhu wese wandinovaudza iyo teregiramu uye kwete kwete, zvakanaka….
Ini handinzwisise zvinorehwa nekuisa whatsapp webhu pane iyo iPhone. Pane iyo iPad ndinozvinzwisisa asi pane iyo iPhone !!!
Kutambisa nguva kwakadii
uye izvo zvinodya megabytes !!!! chii botch !!!
Pindura kuna 9Pelos
Zvinorema zvakadii akadaro
Yakareba rarama teregiramu Mira, hapana wandinofambidzana naye saka izvozvi ndinogona kungotaura ndega…. Zvirinani nezvandinogona kutaura nemumwe munhu
Kana ndikagadzirisa whatsaapp webhu ndinogona here kuongorora whatsaapp yangu kuitira kuti mameseji angu aenzane neni pane imwe nhare?
Mashandisiro aungaita Anemone: iyo nzira kune Winterboard ye iPhone yako